Maanii Paakiyuu ammallee nama naminuu cinaacha lafaan gahuu dadhabe, Flooyid Mayweather yaammate
Amajjii 21, 2019
APTOPIX Mayweather Pacquiao Boxing
Jarii kun lamaan gama bitaatiin Floyd Mayweather(US) fi Manny pacquiao (Philippines) warra dorgommii boksiitiin addunyaan beettu. Warri kun tanumaan horii milyoona hedduu harate.
Maani Paakiyuu,ka amma Floyd Mayweather dorgommii yaammachuutti kun nama biyya Ispaanish.Mayweather armaan durattuu marroo marroo tokko wal dorgomanii marroo 12essoo irratti akkuma duruu moo'u Floyd moo'e.
Dorgommii jarii kun bara 2015 wal dorgomeen dorgommii jabana kanaa, fight of the century jedhaniin.Daqiiqaa diqqaatti Floyd doolara miliyoona hedduu harate.
Maanii Paakiyuu guyyaa dheengaddaa namicha Amerikaatti boksiin gurrii bahe, Eediriyaan Biroowner dhahee qaarsiee amma ammoo isatti Floyd Mayweather yaammachuutti jira
Namii Paakiyuun yaammachuutti jjru,Mayweather haga ammaatti marroo 70 dorgomee 61 moo’e tana keessaa warra wak dorgomeen marroo 39 dhahee gaggabse, ufii ammoo marroo 7 moo'amee 2 amoo walqixxee bahe, lanqaansoo jige.
Maaniyuun kun dorgommii guyyaa dheengaddaa hoteelii MGM Grand,Amerikaa Las Vegas keessatti namicha Amerikaa,Adriyiaan marroo 112 dhahee qaarise.
Maanii Paakiyuu nama ganna 40ti namii innii wal dorgome,Adriyaan ammoo nama ganna 32.
Amma nama takkuma naminuu dorgommii tana irratti Paakiyuun amma namicha Amerikaa ka addunyaa keesattu takkuma dorgommin boksiitin namii cinaacha lafaan hin gahin Floyd Mayweatheri waliin wal dorgomuu fedha.
"Diidatti naa bahi siin jedhaa jedhaa itti naa himaa yoo inni eeyee jedhe," jedhee dhaamae, Paakiyuun.
Filooyidii yoo Paakiyuun Adiryeen moo'e sunillee warra dorgommii dawwachuutti jiru sun keessa jira.Yoo dorgommiif yaammatanillee eeyeti fi iyyoollee hin jenne.
Floyd Mayweather kun marroo 50 dorgomee 50nu isatti moo’e tana keessaa marroo 27 warra wal dorgomeen dhahee gaggabse ufii ammoo takkuma namii cinaacha lafaan hin geenne.
Nama isa cinaacha lafaan gahu dhabee jennaan dorgommi dhiisee yuubomee horii miliyoona hedduu bara dorgommiii suniin tuulatetti deebi’e.Horiin innii hin qabaa jedhan $miliyoona 700.